Gbasara Anyị | Hebei Dfl Minmet Refractories Co., Ltd.
1, Uru ngwongwo
Llọ ọrụ DFL tọrọ ntọala na 2004 bụ ụlọ ọrụ zuru oke nke dabere na mmepụta na azụmaahịa azụmaahịa.
Anyị na-ọkachamara na eke nkume taịl nile, nkume mgbidi cladding, ledgestones, thinner nkume, stacked nkume, paving nkume, omume rụrụ nkume, Mozis, obere okwute nkume, nkume mabul ịkpụ na ngwaahịa na na na na-ọtụtụ-eji na-ewu na hotikoisho akụkụ.
2, Mba ndị na-ebupụ ha
Mgbe ihe karịrị afọ 16 nke mmepe, DFL na-ebupụ na America, Canada, Australia, Argentina, Paraguay, Chile, Mexico, Peru, Italy, Ireland, Spain, Sweden, Japan, HongKong, Morocco, Tunisia, Dijibouti, Angola, Albania wdg. ọtụtụ mba na mpaghara.
3, etiti ụlọ ọrụ
Anyị nwere ngalaba ahia anọ ， otu ngalaba ngalaba na-arụ ọrụ ihe karịrị afọ 10 wee mụta akwụkwọ pụrụ iche, ngalaba njikwa njikwa mma.Ya mere, mgbe ị na-eme ka, ị na-arụ ọrụ rụchaa na anyị ga-eme niile ọzọ nzọụkwụ.
Ndị ahịa ọ bụla bụ VIP anyị, ọ bụghị n'ihi na iwu gị dị obere, ọ gaghịkwa eji ya kpọrọ ihe. N'agbanyeghị ma ọ bụ nnukwu iwu ma ọ bụ obere iwu, anyị nwere otu usoro ahụ ma chọọ nyocha siri ike iji hụ na ogo ruru eru tupu anyị ezitere gị ya.
Na mgbakwunye, ị ga-enwe ndị ọrụ azụmaahịa gị naanị, anyị nwere ọpụrụiche n'ijere ndị ọrụ ibe gị ozi, ndị chọrọ ịrụ ọrụ maka ihe karịrị afọ atọ, yabụ ị ga-ekwurịtanụ okwu nke ọma, anyị agaghị agbanwe ndị ọrụ azụmaahịa ngwa ngwa iji hụ na ị nwere kọwara nkọwa. Agaghị eleghara gị anya, ekwesighi ịmegharị arịrịọ gị ugboro ugboro.
Nkume ndị e kere eke si na ya pụta
PGB OF ỌD OF NKE MMAD N NKE MMAD N, NA-EKPERE AKPANO.
Na-atụ anya iji jeere gị ozi na mpaghara okike okike
DFL nwere akụrụngwa na akụrụngwa ụlọ ọrụ bara ụba, yana teknụzụ nrụpụta dị elu iji gboo mkpa nke ndị ahịa dị iche iche. Ma ị bụ onye nkesa, onye na-ere ahịa, ma ọ bụ nnukwu ụlọ ahịa, anyị nwere ike ịnye ọrụ nkeonwe.
DFL ndị ọkachamara mba soplaya, anyị na-agbaso ụkpụrụ nke “Pụrụ ịdabere na àgwà, ezi uche price, Bịara n'Ezi Oge, Ọkachamara ọrụ”, anyị anyị ngwaahịa a nwalere na ruru eru n'ihi.
-Agha mkpụrụ nke ezigbo Karma
---- Anyị na-ebuga ọ bụghị naanị ngwaahịa anyị, kamakwa ọrụ anyị, ibu ọrụ na ịhụnanya na mbupu ọ bụla.
DFL nkume, ịchụso ihe eke, karịrị nke eke. Jiri ezi obi nwee olileanya na anyị ga-enwe ohere isoro gị.